FaceTime dia nihalehibe tamin'ny iOS 15 fa misy maro hafa koa | Avy amin'ny mac aho
FaceTime dia mihalehibe amin'ny iOS 15 fa misy maro hafa
WWDC 2021 dia natomboka tamin'ny horonan-tsary mampihomehy vitsivitsy izay mijery ny fomba fisainana tsara indrindra momba ny fomba hamoronana fampiharana tsara indrindra. Izany no momba azy, ny fahitana ny fomba fisainan'ireo mpandahatra programa ka lasa tena izy ny fampiharana. Manakaiky ny lampihazo i Tim Cook ary mandefa ny baomba any Craig mba hitantara amintsika ny iOS 15 miaraka amin'ny vaovao lehibe indrindra FaceTime.
1 FaceTime no fampiharana havaozina indrindra ho an'ny iOS 15 amin'ity WWDC 2021 ity
1.1 Feo spatial ho an'ny FaceTime
1.2 Fanatsarana ny fanamafisam-peo
1.3 Fomba fijery vaovao nohatsaraina an'ny mpikambana rehetra amin'ny antso
1.4 Mode potret amin'ny FaceTime
1.5 Famoronana rohy ho an'ny antso an-tsarimihetsika FaceTime
1.6 Manohy amin'ny fiarovana sy ny enkripsi end-to-end izahay
1.7 Fizarana efijery amin'ny alàlan'ny FaceTime. Nozaraina taminao
1.8 Fifanarahana miaraka amin'ny HBO Max, Disney +, TikTok sy maro hafa
2 Aseho koa ny vaovao ao amin'ny iMessage
3 Fampandrenesana nohatsaraina
4 Fomba vaovao mifantoka
5 Lahatsoratra mivantana
6 Vaovao amin'ny Wallet, sary, toetrandro ary sarintany
6.1 Sary fahatsiarovana.
6.3 Ny fampiharana Weather dia nohavaozina.
FaceTime no fampiharana havaozina indrindra ho an'ny iOS 15 amin'ity WWDC 2021 ity
Craig dia manohana ny maha-zava-dehibe ny fifandraisana tsy tapaka amin'ny ora rehetra, fa tsy toy ny resaka manokana amin'ny antso an-tsary, very ny fifandraisan'olombelona tena ilaina. Izany no mahatonga an'i Apple te-hanatsara ny fampiharana FaceTime, miaraka amina andian-dahatsoratra fanatsarana izay hahatonga antsika hampiasa ity fampiharana ity indray.
Feo spatial ho an'ny FaceTime
Ny fampiasa Apple Music vaovao dia miitatra hatrany amin'ny FaceTime. Miaraka amin'ny Audio spatial dia hahazo cfifandraisana madio kokoa, feo mazava kokoa. Manitatra ny feo hahazoana vokatra voajanahary kokoa, toy ny hoe ao amin'ny efitrano iray ihany isika miaraka amin'ilay olona ifampiresahantsika.
Fanatsarana ny fanamafisam-peo
Nolazaina isika fa manomboka izao dia afaka ctabataban'ny vatofantsika ho an'ny resaka mazava sy tsy dia manelingelina. Zavatra hanampy antsika hahatonga ny resaka hahafinaritra sy ho sariaka kokoa. Io ilay antsoina hoe fianarana milina.
Fomba fijery vaovao nohatsaraina an'ny mpikambana rehetra amin'ny antso
Grid View dia tompon'andraikitra amin'ny fananana fomba fijery feno kokoa momba ny mpikambana rehetra amin'ny antso an-tsary miaraka amin'ny FaeTime. Fijery ahazoana aina bebe kokoa, fomba fijery mizarazara manokana izay hahatonga ny serasera ho fialamboly sy voajanahary kokoa.
Mode potret amin'ny FaceTime
Ny maody fakantsary dia tonga amin'ny FaceTime, mahazo ambadika manjavozavo toy ny tratra amin'ny maody sary. Fomba mety tsara amin'ny kaonferansa vidéo matihanina. Mifantoka amintsika izany ary tsy manelingelina ny mpiresaka amintsika ny any ambadika. Mazava ho azy fa hahatonga antsika tsy maintsy ho lavorary amin'ny antso tsirairay.
Famoronana rohy ho an'ny antso an-tsarimihetsika FaceTime
Avy amin'ny iOS 15 dia azontsika atao mamorona rohy handefa ireo izay tianay hiditra amin'ilay antso an-tsary. Tena amin'ny fomban'ny Zoom sy ireo fandaharana hafa ho an'ireo tanjona ireo. Hanomana antso izahay ary hampita izany rohy izany. Fahombiazana, mazava ho azy. Mijery ny tontolo matihanina.
Maso, Mifanaraka amin'ny Android sy Windows koa.
Manohy amin'ny fiarovana sy ny enkripsi end-to-end izahay
Tsy azontsika atao ny milaza momba an'io fampiasa io izay efa nisy tao amin'ny FaceTime. Encryption farany-ho-farany ho an'ny sasany resaka manokana. Zavatra ilaina amin'ny tontolon'ny teknolojia.
Fizarana efijery amin'ny alàlan'ny FaceTime. Nozaraina taminao
Zava-baovao tsy mampino izay manainga ihany koa amin'ny tontolon'ny matihanina. Hizara efijery amin'ireo mpiara-miasa aminay amin'ny alàlan'ny FaceTime izahay. Shareplay dia hanampy antsika koa hiara-hihaino mozika na hiara-mijery andiany. Ho fanampin'izay, ny fanaraha-maso dia ho azo idirana amin'ny alàlan'ny fikitika eo amin'ny efijery.
Lojika, ary raha afaka mizara efijery misy eo amin'ny fitaovana iOS roa isika dia lojika ny mieritreritra fa afaka mizara an'io efijery io amin'ny Apple TV isika. Toy izany koa. Ny symbiose eo amin'ny iOS sy Apple TV ho tonga lafatra. Afaka mandefa ny atin'ny iPhone amin'ny televizionantsika isika.
Ambara fa Nozaraina taminao ho hita ao amin'ny Photos, Apple Music, News, Safari, Podcasts ary Apple TV
Fifanarahana miaraka amin'ny HBO Max, Disney +, TikTok sy maro hafa
Mamaky teny tsara ianao. Manana ao amin'ny portfolioinay fa zava-dehibe ny Apple TV + saingy fantatry ny orinasa fa tsy tian'ny besinimaro izy io, noho izany mandefa fifanarahana amin'ireo fantsona manan-danja indrindra. HBO, HBOmax, Twitch, NBA ... sns
Aseho koa ny vaovao ao amin'ny iMessage
Rehefa mahazo atiny amin'ny Messages ianao dia mety te hamaky azy any aoriana, noho izany dia angonina ao anaty karazana fizarana misaraka ny hafatra izay manondro fa tsy maintsy mamaky ireo hafatra ireo ianao ary afaka miditra amin'izy ireo ianao raha vao jerena.
fampahatsiahivana nohavaozina hahafantarana azy ireo tsara kokoa. Hisy ny sasany izay mitaky ny fijerinao avy hatrany, ary ny sasany tsy mila izany. Ny redesign dia natao hanampiana hanavahana ireo karazany roa. Azonao atao ny mandamina azy ireo ary manome ny laharam-pahamehana ireo izay tadiavinao.
Fomba vaovao mifantoka
Focus Hanolotra anao ireto safidy ireto ho toy ny fenitra fa azo namboarina.
Raha miasa amin'ny maody ianao dia tsy hampandrenesina afa-tsy amin'ny asa, toa ny Kamo na mailaka. Raha mamely ny maody anao manokana ianao dia hahazo fampandrenesana fotsiny avy amin'ny namanao na olona ao amin'ny fianakaviana safidinao.
Fahafahana maka sary an-tsoratra amin'ny solaitrabe, ohatra, mivantana miaraka amin'ny sary. Izy io koa dia hanome ny safidy handika ny «text» mivantana avy amin'ny sary. Izy io aza dia mamantatra ny laharana telefaona handika sy hiantsoana azy.
Ny tsara indrindra dia izay tsy ny sary ihany no miasa nalaina niaraka tamin'ny finday. Miaraka amin'ny pikantsary, sary avy amin'ny Internet ... sns.
Vaovao amin'ny Wallet, sary, toetrandro ary sarintany
Safidy marani-tsaina an'ny anao sary hamoronana fahatsiarovana. Fahatsiarovana ny famoronana mandeha ho azy dia hampiditra mozika mifanaraka amin'ny atiny ihany koa. Azontsika atao ny manova ny filaharan'ny sary, mozika, tetezamita sns.
Io koa dia hahafahanao mitondra "Lakile" amin'ny fiaranao, na koa ny tranonao. Eritrereto ny lakilen'ny hotely. Manomboka amin'ity fararano ity.
Ny fampiharana Weather dia nohavaozina.
Izy io dia mifanaraka amin'ny toetr'andro isaky ny fotoana, miaraka amin'ny Sary an-tsary an-tsary mba maneho tsara kokoa ny fanjakan'ny rivotra, orana, rahona sns.
Toa ilay vaovao ilay izy Ho tonga any Espana sy Portugal koa ny sarintany. Sarintany misy antsipiriany kokoa momba ny faritra ara-barotra, ny haavon'ny terrain, ny fanamoriana lalana toy ny crosswalks, sns. Hanaraka ny lalanao ihany koa ny sarintany ary hampitandrina anao rehefa hivoaka ny metro, ohatra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple products » iOS » FaceTime dia mihalehibe amin'ny iOS 15 fa misy maro hafa
WWDC 2021: Inona no Vaovao ao amin'ny iPadOS 15